निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता किन लागेन ? सत्तारुढ दलकै सांसदले भने– त्यसमा एउटा कारण छ – Himshikharnews.com
निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता किन लागेन ? सत्तारुढ दलकै सांसदले भने– त्यसमा एउटा कारण छ
२० असार २०७६, शुक्रबार १३:२८
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलकै सांसदले उक्त घटना एउटा ‘अपवाद’ रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मुख्य सचेतक एवं सांसद खिमलाल भट्टराईले निर्मला पन्तको नाम नलिइकन ‘कञ्चनपुर घटना’का रुपमा उक्त घटनालाई ‘अपवाद’का रुपमा प्रस्तुत गरे । उनले देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सरकारले मजबुत तुल्याएको दावी गर्दै कञ्चनपुर घटना ‘अपवाद’का रुपमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा एउटा अपवाद घटना, हामी सबैलाई मन रुवाउने एउटा घटना, कञ्चनपुरको घटना, हामी सबैलाई दुःख लागेको छ, तर कारण छ, त्यसमा पनि । त्यसमा पनि कारण छ ।’
उनले त्यस्तो कारण के हो भन्नेबारे केही खुलाएनन् ।
सरकार भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न केन्द्रीत रहेको दावी गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी, विशिष्ट व्यक्तिहरु राजीनामा बोकेर भाग्नु परेको अवस्था आएको बताए । विवादित फैसलामा मुछिएका न्यायाधीशहरु बर्खास्त भएका उदाहरण पनि उनले दिए ।इमेजखबरबाट।